Raysal Wasaaraha UK Oo Amar Ka Soo Saartay Dabkii Ka Kacay Dhisme Ku Yaala Galbeedka London
Tuesday June, 19 2018 - 15:24:18
Friday June 16, 2017 - 10:41:37 in by Ayaanle Hassan
Raysal wasaare Theresa May ayaa amar ku bixisay in baadhitaan buuxa lagu sameeyo dabkii ka kacay dhisme ku yaalla galbeedka London, kaas oo dilay ugu yaraan 17 qof.
Raysal wasaaraha ayaa sheegtay in dadku ay u xaq u leeyihiin inay jawaabo helaan oo ay ogaadaan sababta uu dabku si dhaqso ah ugu faafay.Tirada dhimashada ayaa la filayaa inay korodho, iyadoo kooxda dab damisku aysan rajo ka qabin in dad kale oo badbaaday ay ka helaan dhismaha gubtay ee Grenfell Tower ee ku yaalla degmada North Kensington.
Dhibbanihii ugu horreeyay ayaa lagu sheegay inuu ahaa qaxooti u dhashay Suuriya
laguna magacaabi jiray Mohamed Alhajali oo 23 jir ahaa.
Lix dhibbaneyaal ah ayaa si rasmi ah loo gartay, balse madaxa booliiska London Stuart Cundy ayaa sheegay inaysan awoodin inay caddeeyaan qof walba.
Raysal wasaare May ayaa goor hore booqasho gaar ah ku tagtay goobta, halkaas oo ay kula hadashay madaxa dab damiska Dany Cotton iyo xubnaha adeegyada gargaarka degdegga ah.
Baadhitaankan ayaa la sheegay inuu hoggaamin doono xaakim, ilo wareedyo ayaa sheegaya in dowladdu ay rajeyneyso inay dhowaan ku dhawaaqdo magaca xaakimka, sida uu ku soo warramayo ku xigeenka tifaftiraha BBC-da ee arrimaha siyaasadda Norman Smith.
Baadhitaannada buuxa ayaa loo sameeyaa sababo kala duwan dartood. Mararka qaar waxaa loo sameeyaa in daaha laga rogo runta kaddib marka arrin lagu muransan yahay ay dhacdo, amaba si eedda loogu soo rogo shakhsiyaad.
17/06/2018 - 12:06:49
War Deg Deg Ah Raysal Wasaaraha itoobiya Oo Is Casilaad Ku Hanjabay Iyo Sababta Ku Dhalisay